धोती र टोपीबीच खोजिने राष्ट्रियताको करिब अन्त्य हुँदा उदाएकी सरिता गिरी को हुन् ?
काठमाडौं, ३१ जेठ । नेपाली राजनीतिमा नेपाली अनुहार र नेपाली नागरिकता बोकेका मान्छेहरु छन् जो नेपाली तलव भत्ता बुझेर विदेशीका लागि काम गर्छन् ।
जसमध्ये की हुन् चिनेजानेकी संसद सरिता गिरी । उनी लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालको हो भन्ने कुरा कति पनि मान्दिनन् । नेपाल कै सदनमा नेपालको सार्वभौम अखण्डता विरुद्ध बोल्ने सरिता गिरी आखिर को हुन ? यो प्रश्न अहिले सबैले उठाउन थालेका छन् ।
योसँगै धोती र टोपी बीचमा खोजीने राष्ट्रियता करिव करिव अन्त हुँदा एकाएक उदाएकी गिरीको बारेमा अहिले सर्वत्र चर्चा चल्न थालेको छ । भारतसँगको सीमा विवाद जारी रहँदा नेपालले आफ्नो भूमि समेटेर संशोधित नक्सा प्रकाशित गरेको कुरालाई संविधान संशोधन गरी सदर गर्ने सन्दर्भमा पेश भएको प्रस्तावमा समर्थन गरेर दलहरुले नेपालको एकता विश्वसामु देखाएका हुन् ।
तर, एक भारतीय चेली र नेपाली बुहारी संसद सरिता गिरीलाई यो पाच्य भएन । कानूनमन्त्री शिवमाया तुम्बाहाम्फेले पेश गरेको संशोधन प्रस्तावलाई सबै दलहरुले समर्थन गरेका थिए ।
तर, सांसद सरिता गिरीले त्यो प्रस्तावमा समर्थन गर्न सकिनन् । उनले संसदमा कानूनी अधिकारको प्रयोग गर्दै संशोधन प्रस्तावमाथि संशोधन दर्ता गराएकी थिइन् । साथै नेपाल सरकारसंग नक्सामा समेटिएको भूमि नेपालकै हो भन्ने प्रमाण देखाउन चुनौती दिइन उनले । अझ नेपालको हालत बंगलादेश हुनेसम्मको चेतावनी पनि उनको थियो ।
अन्ततः संविधान संशोधन विधेयकमा समाजवादीकी सांसद सरिता गिरीले दर्ता गरेको संशोधन प्रस्तावलाई सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले अस्वीकृत गर्नुभयो । गिरीले दर्ता गरेको संशोधन ‘विधेयकको निहित सिद्धान्तको विपरीत’ रहेको भन्दै सभामुख सापकोटाले संशोधन अस्वीकृत गर्ने निर्णय गर्नुभयो ।
संविधान संशोधन विधेयकमा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेकी जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) की सांसद सरिता गिरीलाई संसदमा बोल्न नदिएपछि उनी संसद बैठकबाट बाहिरिन ।
नेपाली सांसद भएर भारतको पक्षमा खुलेआम बोल्ने कुरामा गिरीले गर्व गर्दै आएकी छिन् । योसँगै कस्तो जनप्रतिनिधिलाई हामीले चुनेर पठाएका छौं भन्ने कुराको मूल्यांकन गर्ने बेला आएको छ, उनको आफ्नै देशविरुद्ध अभिव्यक्ति दिन सक्ने आँटलाई हेरेर ।
सिंगो मुलुक राष्ट्रियताको मुद्दामा ‘नायक’ भएका बेला एकजना सांसद सरिता गिरी खलपात्रका रुपमा किन देखा परिन् ?
आखिर सरिता गिरी को हुन् ?
सरिता गिरी भारत माइती र नेपाल घर भएकी अंगिकृत नेपाली नागरिक हुन् । उनी समाजबादी पार्टी कि संसद हुन् । त्यसभन्दा पनि बढी उनी पूर्वमन्त्री पनि हुन् ।
देशको राष्ट्रिय सुरक्षाका महत्वपूर्ण विषयहरुमा व्रिफिङ लिइसकेकी नेपालकी मन्त्री । धेरैजसो भारतीय मिडियाले उनी अहिलेसम्म पनि भारतीय नागरिक रहेको दावी गरेका छन् । इण्डिया टुडे अनलाइनका अनुसार गिरी सधैँ नेपालको हितको पक्षमा भन्दा भारतको हितमा सोच्ने गर्छिन ।